Vondronosy Karaiba: Ny Fanehoam-pankasitrahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2007 16:02 GMT
Dia mitohy ihany ny fitantarana ireo fomba aman-danonana manerantany. Ao anatiny indrindra ny any Etazonia amin’izao fotoana izao. Dia resaka momba ny fomba avy any indray no resahintsika na dia ny any amin’ny nosy manodidina aza no ho tantaraina etoana. Mety hoe fialantsasatra mahazatra ny Amerikana Tavaratra ny Thanksgiving (androm-panehoam-pankasitrahana) saingy toa mihaliana ihany koa ny vondronosy Karaiba ao atsimo atsinanany ao. Na ho an’ireo avy amin’ny fiarahamonina Karaiba fihaviana tafaorina any an-tanan-dehibe amerikana tavaratra, na ilay fiarahamonina kely nanori-ponenana manerana ireo vondronosy Karaiba ireo, eny na dia ilay fitenenana hoe « mankasitraka, tompoko » (mety ho mahazatra ny maro ny teny hoe misaotra tompoko fa dia io aloha no noraisiko) fotsiny die tahaka ny anton-javatra goavana be tsy hiasana ( sy hianarana), dia maro ireo mpamaham-bolongana ao amin’ny faritra (Karaiba) mitady Amerindiana sariaka hanoloram-pankasitrahana …
Bryan Morris, mpamaham-bolongana avy ao Aruba ohatra dia manaiky fa « tsy tena ahitana fankalazana goavana loatra ny Thanksgiving ao aminy saingy navoitrany kosa fa …
Ny fizahantany no orinasa mpampidibola indrindra eto Aruba ary ny Amerikana (Mankasitraka tompoko !) no mitana ny isanjato be indrindra amin’izany…noho izany dia ankalazaina ihany ny androm-pankasitrahana noho ny fivelarany.
Etsy ankilany, Puerto Rico, izay zaratany etazoniana (US), dia manaja ny andro – ka manararaotra ny fotoana indrindra i Dondequiera manome ny lisitry ny zavatra vitsivitsy heveriny fa tokony hanehoan’ny Poertorikana fankasitrahana :
Misaora ianareo izay mitoetra amin’ny toerana manana toetr’andro mahafinaritra mandavataona, anivon’ny torapasika amoron-dranomasina, rano mangamanga, ary tsio-drivotra mafana. Mahatonga ny zavatra hafa ho azo iainana tsara izany.
Misaora ianareo fa miaina amin'ny firenena afaka maneho tsara ny safidinareo, afaka manohitra ny governemanta, afaka manaraka na tsia fivavahana. Fa be dia be tokoa ny vahoaka tsy manana izany zo anananareo izany.
Babalu Blog indray moa dia resy lahatra fa « ny fanehoam-pankasitrahana angamba no tena porofo marina manambara ny mahaKiobana-Amerkana:
Isaky ny Alakamisy fahaefatry ny volana Novambra no ahitana ny sakafo tsara indrindra avy amin’ny tontolo roa Kiobana Amerikana (ataovy hoe Amerikana izay Kiobana fihaviana raha izay no sitrakao) noho izay iainanay andavanandro.
Manoratra i Pwoje Espwa – Hope in Haiti :
Mety ho hafahafa aminao izay mivory miaraka amin’ny fianakaviana sy ny namana ny mandre fa toy ny andro mandavataona tsotra ihany ny Adrom-pankasitrahana aty atsimon’i Haiti. Tsy misy matso, tsy misy lalao baolina mandeha amin’ny fahitalavitra, tsy ahitanao latabatra lehibe feno hanim-pitoloha sy vorontsiloza (mampiavaka indrindra ity fety ity). Izany tsy midika hoe tsy mahay mankasitraka izahay.
Mino i Belize-y Livin’ fa « tokony hankasitraka indrindra » izy, saingy tsy fetimbahoaka iraisana moa ity raharaha ity any Barbada, hoy i My Barbados Blog :
Eo ampanisana ny tso-drano sy ny fanomezana teny mamy izahay, dia manokana andro lavalava ialana sasatra, ary dia hiverina indray amin’ny alatsinainy hamaham-bolongana e !
Jamaican blogger Geoffrey Philp izay mpamaham-bolongana Jamaikana kosa dia nandika Tononkalo ho amin’ny Androm-pankasitrahana, rehefa nankalazaina taoriana indrindran’ny fifidianana tany Trinite sy Tobago ny Now Is Wow‘s “Thanksgiving”:
Nankany amin’ny tokotanin’ny « Tolo-tanana » tao Pasea nisy ny fihaonan’ny mpifety ny Thanksgiving aho. Nanonja sy nampibitaka tokoa ny fihaonana. Fihaonambe niarahan’ny finoana samihafa no tao, nahitana ireo mpitari-pivavahana isankarazany ( Silamo, Haindo, Kristiana, sns) izay samy nivavaka fohy … Toa tsy tena mahatsiaro ny tenako ho tia tanindrazana loatra aho rehefa i Trinite sy Tobago no resahina… fa tena nanohina ahy kosa ny fiarahana sy ny fifanajana teo amin’ny olona ary ny fahazotoana sy ny fifanoloram-boninahitra teo amin’izay nandray anjara. Nilamina, niray aina ny rehetra, mampahatsiahy ny andro lasa ny takariva..
Ity angamba no faratampony tamin’izay soratry Dondequiera:
Misaora ireo izay naneho asa mahafaly ny hafa na dia kely fotsiny ihany aza. Mety hisy vokatsoa manerana ny fiarahamonina ihany manko izany.